सुशील सम्झाउने 'नेपाल'का १३ आवरण - सम्झना - नेपाल
सुशील सम्झाउने 'नेपाल'का १३ आवरण
सुशील कोइरालालाई इतिहासमा कसरी सम्झिने ? उनको जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी मानिएको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा उनी कसरी अगाडि बढे, कहाँनिर कस्तो अडान लिए वा कसरी लचक भई सहमतिको वातावरण तयार पारे । कोइराला परिवारको साख र आड बोकेका उनी के साँच्चिकै लोभ–मोहभन्दा माथि उठेका त्यागी नेता थिए ? उनको पार्टी र देशकै नेतृत्व क्षमतालाई कसरी बुझ्ने ? यस्ता अनेकौं जवाफ 'नेपाल'का यी आवरणहरुले इतिहासको मुल्यांकन र सन्दर्भका लागि छाडेर गएका छन् ।